Usicacisa njani iSicwangciso seNtengiso seVidiyo? | Martech Zone
NgoMvulo, Juni 23, 2014 NgoMvulo, Juni 23, 2014 Douglas Karr
Ayibobungqina nje obune-anecdotal obuxhasa ukusetyenziswa kwevidiyo, yisayensi yevidiyo ethi ithathe ingqalelo kunye nemvakalelo yombukeli okanye obhalisileyo. Besisoloko sityhala bonke abaxumi bethu ukuba bathathe inxaxheba kwividiyo kwaye besifafaza kuzo zonke iisayithi zabo… ukusuka kwiividiyo ezichaza imveliso, ukuya kwimifanekiso eshukumayo entsonkothileyo, kubungqina babathengi nakwindlela eqhelekileyo yokwenza… iividiyo ziyaqhubeka nokwandisa ukubandakanyeka kunye nokuguqula iisayithi zabaxumi bethu.
Iividiyo aziboneleli kuphela ukonyuka okungama-74% kwimveliso okanye inkonzo yakho xa kuthelekiswa nemifanekiso, kodwa ikwonyusa amathuba okuba iindwendwe zakho zithenge imveliso okanye inkonzo yakho ngama-64%.
le infographic evela kwiQuicksprout uhamba ngayo yonke into oyifunayo ukuze uthethelele utyalo-mali lwakho kwintengiso kwividiyo. Azisekho iividiyo zotyalo-mali olunemivo emi-5, nokuba! Akuqhelekanga ukuba nevidiyo enobungcali, eveliswe kakuhle engaphantsi kwee- $ 10k-nokuba zinezandi kunye neefoto.
tags: iindleko zokugwetyelwaIiVidiyo zeNtengisoezingabalulekangaividiyo kwi-imeyileukuthengisa ividiyoiziphumo zokuthengisa ividiyo
IFirehoseChat: Ingxoxo yeSayithi edityaniswe neMac, i-iPhone kunye ne-iPad